Ihe kacha mma na-enye na ekwentị site na ndị ọrụ | Gam akporosis
Ndị ọrụ ekwentị
Onu ogugu di uku ndị ọrụ ekwentị, taa a maara ụfọdụ n'ime ha karịa ndị ọzọ, ụlọ ọrụ kama ọkwado na ndị ọzọ na-arụ ọrụ na otu ndị ọzọ si mba ọzọ. Ọtụtụ n'ime ndị a ndị na-arụ ọrụ Ha nọ nke ọma n'ahịa, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị isi okporo ụzọ na mba ụfọdụ yana ndị ọzọ na mba ofesi. N'ime oghere a ị nwere ike ịchọta ozi metụtara ndị ọrụ ekwentị na anyị nwere ike ịchọta, ịmara ọnụego ha na onyinye ha bụ nnukwu nhọrọ ịhọrọ nke anyị chọrọ iji kpaa nkata.
Enyele na telephony
N’okpuru ị ga - achọta onyinye ka mma na telephony ya na ndị na - ahụ maka ekwentị mkpanaaka (Movistar, Orange, Vodafone, Amena na ndị ọzọ) nke mere na ịme ọhụụ ma ọ bụ ndebanye aha ọhụrụ dị ọnụ ala. Were uru nke ego wee nweta ọnụ ala dị ala site na iji onyinye ndị a:
Meziwanye mkpanaka mkpanaka: aghụghọ, ihe nkwado na ndụmọdụ
2020 bụ afọ nke mkpuchi 5G ga-amalite ịbụ eziokwu na mba ụfọdụ dịka Spain, ...
Aha APN (Aha Ntuziaka Aha) bụ aha nnweta nweta nke taa ahaziri site na ...
Vodafone na-eweta 5G na-agagharị na obodo 55 na Europe
Vodafone bụ ụlọ ọrụ na-ebuga 5G n'ọtụtụ mba na Europe maka izu ole na ole, gụnyere ...
5G bịarutere Spain n'izu a site n'aka Vodafone
Izu ole na ole gara aga, ekwenyela na Vodafone ga-eweta 5G na Europe n'oge okpomọkụ a, dịka ...
South Korea enweela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1 nde ndị ọrụ 5G
Mba mbụ nwere azụmahịa 5G azụmahịa bụ South Korea n'April. Ntinye aha dị ka ...
Vodafone na-enye ọrụ ntanetị 5G na obodo ise na Italytali
Usoro ntanetị 5G na-aga n'ihu ịgbasa n'ụwa niile. Mba dika South Korea, United Kingdom, Switzerland na Steeti ...
Nsogbu ndị a na-arị elu maka Huawei. Companylọ ọrụ China, nke nwere ike ịnwe ohere ịzọpụta onwe ya, na-ahụ etu ire ya ...
Afọ ole na ole gara aga, ịgagharị gafere na European Union. Nzọụkwụ mbụ ...
Mba ụfọdụ enweela netwọkụ 5G na-arụ ọrụ nke ọma karịa ihe karịrị otu ọnwa. South Korea bụ ...
Ndị Uwe Ojii Mba na Orange dọrọ aka ná ntị banyere nsogbu ndị malitere ịrịa nke ọdụdụ nwa
Ndị Uwe Ojii Mba na Orange bụ mmadụ abụọ na-amalite atụmatụ ọhụrụ a akpọrọ # PorunusoLovedelatecnología. Ama m…
Afọ atọ gara aga, Google mepụtara onye ọrụ ya na United States. Ọ bụ ihe ụlọ ọrụ mere n'ụzọ ...
Pepephone's Inimitable Trio ọnụego ugbu a
Nweta Galaxy S8 + na ire ere na ọnụego na-adịghị agwụ agwụ nke Yoigo
Ndị a bụ MásMóvil's Black Friday amụọ
Meghari ohuru ama gi na Yoigo Black Friday
Etu ị ga-esi kpota ọnụọgụ ego nke Freedompop 4G ma ọ bụ otu esi arịọ maka mgbanwe SIM ma ọ bụrụ na ị bụrụworị onye ahịa
[Emelitere] Atọ iji melite ọsọ Yoigo. (Inweta 800 Mhz na 2600 Mhz band). Banye iji lee vidiyo ahụ.
Etu esi wepu aka na Ya Voy de Movistar ma ghara ịnwụ ịnwa
fonYou: Nọmba ekwentị mkpanaka gị ọzọ anaghị akwụ ụgwọ